Inqaku leRedmi 7 liya kufumana iNdlela yoBume beXesha leXiaomi Mi Mix 3 | I-Androidsis
El Redmi Qaphela 7 yasungulwa kwiveki ephelileyo njengenxalenye yefayile ye- ukuzimela kweRedmi brand kwinkampani yabazali bayo, eyayinguXiaomi. Emva kwesibhengezo sayo esisemthethweni, uninzi lwabasebenzisi abalulangazelelayo. Ukusukela izolo, intengiso iqale, kwaye nge Inkxaso elungileyo yesitokhwe ukubaxhasa kuyo yonke inyanga kaJanuwari.
Amabali eendaba aliqela ajongane nale smartphone iphakathi kwinqanaba eliphakathi. Omnye wabo uthethe ngophononongo lwe isixhobo sokumelana nesixhobo, apho avavanywa khona ngokuphathwa gadalala kwaye uyakunyamezela ngaphandle kokubandezeleka. Ngoku, entsha imalunga naye Imo yasebusuku Mi 3 Mix ukuba ifowuni iyakufumana ngohlaziyo oluzayo.
UXiaomi ukuqinisekisile oku ngephepha elisemthethweni le-MIUI eWeibo, xa umsebenzisi wenethiwekhi yoluntu ebonisa ukoneliseka kwakhe Umxube we-2s ndinendlela yemo yasebusuku. Igosa emva koko latyhila ukuba iRedmi Qaphela 7 esandleni sayo inenqaku kwaye Uluhlu olupheleleyo lweRedmi Qaphela 7 luya kufumana uhlaziyo kamva. Inqaku ngokucacileyo liyavavanywa kwaye ngethemba lokuba uhlaziyo luya kufumaneka ngexesha elingekude kakhulu.
Imowudi yemozulu yasebusuku yaqala ukwaziswa kwiMi Mix 3 kwaye kamva kwi I-Mi 8 Pro kunye noMxube 2. Inqaku livumela abasebenzisi ukuba bathathe iifoto ze-HDR ebusuku ezibonakala ziqaqambileNokuba isibane siphantsi. Imozulu yoBume beNdawo yoBusuku ithatha iifoto ezininzi ngokuchazwa okungafaniyo kwaye idibanisa umfanekiso omnye nengxolo encinci kangangoko. Ikhamera inokukwenza ngokudibanisa iitekhnoloji ezi-8 ezahlukeneyo kubandakanya i-HDR, i-AIS, i-4-axis OIS, kunye nokuncitshiswa kwesakhelo sezandi ezininzi.
Ngale nto engqondweni, hlala ubukele nathi kwiphepha langaphambili lohlaziyo lweRedmi yeNqaku 7 elandelayo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izaziso » Inqaku leRedmi 7 liya kufumana iNkqubo yoBume beXesha leXiaomi Mi Mix 3 ngohlaziyo
Iindlela ezizezinye ezilungileyo kwiGmail ye-Android